Wasiirka Caafimaadka Puntland oo ka digay dilaacida cudurka shuban biyoodka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWasiirka Caafimaadka Puntland oo ka digay dilaacida cudurka shuban biyoodka
Wasiirka Caafimaadka Puntland Cabdinaasir Cusmaan Cuuke. [Xigashada Sawirka: Garowe Online]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wasiirka Caafimaadka Puntland Cabdinaasir Cusmaan Cuuke ayaa ka digay suurtagalnimada in xanuunka shuban biyoodka uu ka dilaaco gudaha gobolada Puntland.
Isaga oo gudaha Garoowe kula hadlayay warbaahinta maxaliga ah shalay oo Sabti ahayd, Cuuke ayaa sheegay in waxyaabo ay kamidyihiin bakhtigii xoolihii abaarta ku dhintay oo ay biyaha daadadku qaadeen oo ku shubeen ceelasha biyaha kuyaala dhulka miyiga ah ay keeni karaan cudurka shubanka biyoodka.
Wasiirka ayaa sheegay in Wasaaradda Caafimaadka ay diri doonto kooxo caafimaad si ay u qaybiyaan daawada jeermiska disha si loogu isticmaalo ceelasha biyaha iyo in la qaado ololeyaal ujeedkoodu yahay kor u qaadida wacyigelinta bulshada ee cudurka.
Cudurka ayaan ka jirin gudaha Puntland balse waxaa jira dhowr kiis oo laga so sheegay meelaha qaar, sida uu sheegay Wasiirka Caafimaadka.
September 24, 2017 Dowladda hoose Garoowe oo kaashanaysa dhalinyaro oo bilaabay olole nadaafadeed
Seoul-(Puntland Mirror) Shirkada Samsung ayaa joojisay iibka taleefoonkeeda gacanta ee Galaxy Note 7 kadib markii laga helay qayb taleefoonada kamid ah in ay qarxaan marka la dabaynayo. Madaxweynaha shirkada taleefoonada gacanta ee Samsung, Koh Dong-jin, [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Milatariga Mareykanka aayaa sheegay in dhowr dagaalyahan lagu dilay duqayn ka dhan ahayd Al-Shabaab iyadoo maamulka Trump uu kordhinayo bartilmaameedyada dhimashada leh ee maleeshiyada argagixisada ah. Duqaynta ayaa shalay galab oo Khamiis ahayd [...]
Puntland is deploying troops to Sool region, heavy fighting could happen at any time
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland is deploying hundreds of its armed forces to Sool region, indicating that heavy fighting may erupt between Puntland and Somaliland at any time , military source said. A Puntland military source, who [...]